सिन्धुली जाँदै प्रचण्ड, केके छन् कार्यक्रम ? - ramechhapkhabar.com
सिन्धुली जाँदै प्रचण्ड, केके छन् कार्यक्रम ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज सिन्धुली जाने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र सिन्धुलीको नवनिर्मित पार्टी कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड सिन्धुली जान लागेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले एक विद्यालयको भवनकमो समेत उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। अध्यक्ष प्रचण्डसँगै शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि सिन्धुली जाने कार्यक्रम छ।
भवन उद्घाटनका लागि प्रचण्ड आज दिउँसो १ बजे सिन्धुली आई पुग्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए।
भवन उद्घाटनपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आजै सिन्धुलीका उद्योगी व्यापारीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सिन्धुलीका कार्यक्रम सकेर अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार काठमाण्डौं फर्कने छन्। स्थानिय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले देश दौडाहा तीब्र बनाएका छन्।
यो पनि…चेपाङ सङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु
नेपाल चेपाङ सङ्घको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यहाँ सुरु भएको छ । महाधिवेशनको बिहीबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।